Iintsomi zeGalicia: Iintsomi zelizwe elimangalisayo | Iindaba Zokuhamba
ULuis Martinez | 03/06/2021 10:20 | Spain izixeko, isiko, España
Iintsomi zaseGalicia ziphendula kwi-idiosyncrasy yommandla onamakhulu eminyaka yembali. Imozulu yayo emnyama nemvula, amanxweme ayo amabi kunye neentlambo ezinzulu ezinemithi nazo zibolekisa ngokumangalisayo ekubonakaleni kweentsomi kunye neentsomi.
Ke ngoko, ayenzeki ngamabona-ndenzile ukuba iGalicia yindawo ezele amabali aqhelekileyo. Ezinye zineengcambu zazo kumaxesha kwaye, ngokumangalisayo, zinxulumene namabali afanayo azalwe kumbindi nakumantla eYurophu. Abanye, kwelinye icala, ngabomthonyama bokwenyani kwaye baphendula kwezona zinyulu Iintsomi zamandulo. Ukuba uyalithanda ilizwe eliyintsomi, siyakumema ukuba uqhubeke nokufunda, njengoko siza kukuxelela ngezinye zeentsomi ezikhethekileyo nezaziwayo zaseGalicia.
1 Iintsomi zeGalicia: Ilifa lomlomo elingaqhelekanga
1.2 ICosta da Morte, iqula lamabali
1.3 Inqaba kaHercules
1.4 Isithsaba somlilo, ilivo elikhohlakeleyo lamaxesha aphakathi
1.5 Icawa yaseSanta María de Castrelos kunye nomdlalo wentsimbi
1.7 Umqolomba kaKing Cintolo
Iintsomi zeGalicia: Ilifa lomlomo elingaqhelekanga
Amabali amaninzi aseGalicia asekhona ukuza kuthi ga kulo mhla amile kuvavanyo lwexesha ngenxa yokungaqhelekanga isithethe somlomo welo lizwe. Kungenxa yokuba uninzi luvela kwinkcubeko ethandwayo edluliselwa kwizizukulwana ngezizukulwana ngamabali abaliswa ngobusuku obubandayo emazantsi omlilo. Kodwa, ngaphandle kokuqhubela phambili, siza kukuxelela ngamanye ala mabali.
Mhlawumbi oku, kwangaxeshanye, ilivo ethandwa kakhulu Galicia kwaye iphindaphindwe kakhulu kumazwekazi onke amahlanu. Ngokubanzi, ithi umngcelele wabafileyo ubaleka unqumla kumhlaba waseGalician ebusuku uxwayisa ngokufa okuzayo. Phambi kwenkqubo enjalo eyoyikisayo kuhamba isibuko esikhulu esibizwa Ibala kwaye nabani na oyibonayo kufuneka ayilandele ngesiphatho sezibane kunye nekhitshi.
Njengoko besesitshilo ngaphambili, eli bali linokunxibelelana kwezinye iindawo zaseYurophu. Umzekelo, idityaniswe Ukuzingela endle o UMesnie hellequin yamazwe aseJamani. Kodwa akufuneki ukuba siye kude. Iintsomi ezifanayo ziyafumaneka kwezinye iintsomi zeepeninsular. Njengomzekelo, singakhankanya ifayile ye- IGüestia kwiAsturias, i Uloyiko e Castile kunye iCorteju e-Extremadura kunye namanye amabali kwiindawo ezahlukeneyo.
Kwelinye icala, njengayo nayiphi na intsomi elungileyo eyoyikisayo exabisa ityuwa yayo, le ikwanazo neendlela zayo zokulwa iimpembelelo zokubona iSanta Compaña. Phakathi kwabo, yenza umnqamlezo ngandlela thile, zoba isangqa emhlabeni kwaye ungene ngaphakathi ngelixa udlula okanye ungene kwinqanaba lokuhamba ngenqanawa.
ICosta da Morte, iqula lamabali
Njengoko usazi, kwinxalenye esemantla ntshona yeGalicia yi ICosta da Morte ICosta de la Muerte, intsimi egama layo sele lizibophelela kubukho beentsomi. Eyokuqala kubo yenzeka ngexesha lamaRoma, kuba bebecinga ukuba iphawula i finis terraeOko kukuthi, isiphelo somhlaba.
Kulapho ulwandle lwaqala khona kwaye, ngokwenkolelo yamaRoma, abo bangena kulo baginywa, nokuba kungamanzi ngokwawo, okanye zizidalwa ezoyikekayo. Phambi kwabo, amaCelts ayeqhelisela unqulo lwelanga kuloo mazwe.
Kodwa inyani kukuba uburharha baloo manxweme kunye namandla eAtlantic ebangele ukuba kubangele uninzi Ukwaphuka kwenqanawa. Kwaye le yenye indawo efanelekileyo yokuzalela kwiintsomi. Phakathi kwazo, ezo zeedolophu zakudala ezazingcwatywa ngamanzi, ezo zamatye angummangaliso okanye ezo zabangcwele eziphilisa meigallo (iliso elibi).
Kuphela kwendlu yokukhanya yamaxesha amaRoma ahlala emile. Ke ngoko ineminyaka engamawaka amabini yembali. Njengoko uya kuqonda, kusengqiqweni ukuba ngeenxa zonke kwinqaba kuye kwavela iintsomi ezininzi kunye namabali asentsomini.
Eyona ethandwa kakhulu kukuba abahlali Brigantium okanye uBreogan babehlala kuloyiko lwengxilimbela Geryon, abafuna zonke iintlobo zeerhafu kubo, kubandakanya nabantwana babo. Bejamelene nokungakwazi ukumoyisa, bacela uncedo Hercules, owamcela umngeni kwimbambano kwaye wamoyisa emva kwengxabano enegazi.
Emva koko uTshawe wangcwaba uGeryon, kwaye phezu kwengcwaba lakhe, waphakamisa inqaba awayithwesa ngetotshi. Ngokusondeleyo kakhulu, ukongeza, wadala isixeko yaye njengoko umfazi wokuqala weza kuye I-Cruña, UHercules wabiza le lali intsha ngegama La Coruña.
Elinye ibali malunga nenqaba kaHercules ithi kwindawo apho Inqaba yaseBreogán. Lo ngewayengukumkani odumileyo waseGalikhi ovela kwi Iintsomi zerish, ngokukodwa kwi ILebor Gábála Érenn o Incwadi Yoloyiso yaseIreland.
Ngokwentsomi, uBreogán ngewayephakamisile le nqaba kwaye, encotsheni yayo, abantwana bakhe banokubona umhlaba oluhlaza. Banqwenela ukumhlangabeza, bakhwela bayafika Ireland. Ngapha koko, emazantsi enqaba yeHercules ungabona namhlanje umfanekiso oqingqiweyo onikezelwe kukumkani wasentsomini, ongomnye wamanani amakhulu eentsomi zaseGalician.
Isithsaba somlilo, ilivo elikhohlakeleyo lamaxesha aphakathi
UMonforte de Lemos yenye yeedolophu ezibalaseleyo eGalicia. Enye yeentsomi zayo ithi ngokuchanekileyo phakathi kwe nqwelweni wedolophu kunye I-monastery yaseBenedictine yaseSan Vicente del Pino Kwakukho indawo efihlakeleyo engaphantsi komhlaba.
Elinye lamaxesha apho Inani leeLemos Wayengekho kwinqaba ukuzalisekisa ikhomishini evela kukumkani, i-abbot ye-monastery yathatha ithuba lokundwendwela intombi ye-aristocrat, awayeqale nayo ukuthandana.
Ukubuya kwakhe, indoda yaseLemos yafumanisa kwaye yamema umbingeleli ukuba atye. Kodwa ngexesha le-dessert, endaweni yezi, wamnika isithsaba esinyithi eshushu, wasibeka entloko, wasweleka. Okwangoku, ecaleni kwendawo yokubhaptizwa yecawa yeemonki, ungabona ingcwaba lika-abbot onelishwa UDiego Garcia.
Icawa yaseSanta María de Castrelos kunye nomdlalo wentsimbi
Icawa yaseSanta María de Castrelos
Imbali ithi kwidolophu yaseVigo ICastrelos Wahlala umkhandi weentsimbi endandiyithanda kakhulu intombazana encinci. Wayesele ekhulile kwaye kwakuqala ukuba kwenzeke kuye. Ugqibe kwelokuba amnike isacholo esihle, kodwa wasikhaba.
Xa isigwebo sakhe sasilahlekile, wakhetha ukumthimba kwaye wamvalela kwindawo yakhe yokunyibilikisa. Nangona kunjalo, eli bhinqa liselula lamcela ukuba limyeke aye kubunzima yonke imihla. Ekubeni icawa yayiphambi kwendibano yakhe, le ndoda yamkela.
kunjalo, iMeiga watyelela umkhandi weentsimbi ukwazisa ukuba uza kufa kungekudala kwaye intanda yakhe izakutshata enye indoda encinci kunaye. Emfanyekiswe ngumsindo, wathatha intsimbi eshushu waya ecaweni eyonakalisa ubuso bentombazana. Nangona kunjalo, Iidayos ebenezinye izicwangciso. Ngokukhawuleza, wavala umnyango wokungena etempileni ukuze akhuseleke. Usengayibona into engasezantsi kwicawa namhlanje ucango lwezitena.
Icawa yaseSan Andrés de Teixido
Le parishi incinci kwidolophu yaseCoruña Cedeira It has a hermitage, nto leyo into into uhambo. Phakathi kwabemi bendawo intetho iyathandwa «To San Andrés de Teixido is de morto okanye that non foi de vivo» kwaye uphendula ilivo elaziwayo.
Ithi lonto ISan Andrés Ndandibawela Santiago, eyayisele iyinto yohambo. Wenza isikhalazo kuye Iidayos, owayechukunyiswe lusizi. Ke wamthembisa ukuba bonke abantu abafayo bazakuhamba ngomngcelele ukuya kwingcwele yakhe kwaye nabani na ongaphiliyo uyakwenza oko emva kokuba efile, aphinde azalwe abe sisilwanyana.
Umahluko weli bali uthi iSan Andrés yaphukelwa yinqanawa kunye nesikhephe sakhe kula manxweme kwaye inqanawa yaguqulwa yenziwa amatye namhlanje abumba isiqithana esincinci kunxweme lwaseCedeira. Okothusayo kukuqhekeka kwenqanawa kangangokuba uThixo wathembisa ongcwele ukuba uya kutyelelwa kwindawo yokugcina izilwanyana ngabantu bonke.
Umqolomba kaKing Cintolo
Siza kulugqibezela uhambo lwethu ngeentsomi zaseGalicia ngale ibandakanya ookumkani abanobubele, amakhosazana amancinci, abakhafuli abakhohlakeleyo abenza imimangaliso kunye namakhwenkwe ngothando.
Umqolomba iKing Cintolo ngowona mkhulu eGalicia, ungaphezulu kweemitha ezingama-6 500 ubude. Igcwele UMariña Lucense, ingakumbi kwiParish ye Ubundlobongela. Ewe, ngokwentsomi, kumaxesha amandulo, le ndawo yayiqhuba kakuhle ubukumkani baseBría ongukumkani wakhe Ibhanti.
Ngelo xesha, wayenentombi entle egama lingu-Abraham Xila owayethandana ngokunzulu nalo mfana Uxío, owayehambelana naye. Nangona wayengenasidima, umtshato phakathi kwaba babini wawusele uvumile xa umlumbi onamandla UManilan Woyikisa inkosi ngokudala ikhubalo eliza kubuphelisa ubukumkani bakhe ukuba akamnikeli uXila njengomfazi wakhe.
Kodwa u-Uxío wayengafuni ukuyivumela kwaye wambulala umlumbi. Nangona kunjalo, wayesele elungiselele ukupela kwakhe kwaye, xa umthandi onesibindi wabuyela eBría, wayesele enyamalele. Kule ndawo wayekuyo, wafumana umlomo womqolomba. Ukuphelelwa lithemba, wangena kuyo ukukhangela intanda yakhe kwaye akazange aphume kwakhona.
Ukuqukumbela, sikuxelele ezinye ze iintsomi zaseGalicia Ethandwa ngakumbi. Kodwa zininzi ezinye esiza kuzishiya, mhlawumbi, zenzelwe elinye inqaku. Phakathi kwabo, leyo Isiseko sePontevedra, leyo ye intaba yeparalaia, leyo ye ummangaliso weBouza okanye ye INtaba iPindo. Yonke into ejikeleze iGalicia ngumlingo kwaye inika umdla, ke ukuba unako, ungaphoswa lithuba lokubalekela kwezinye zeendawo esele sizichazile kwaye wonwabele ubuhle be ukhenketho lwasemaphandleni kule ndawo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » Iindawo ezibalekayo eYurophu » España » Iintsomi zeGalicia